ओपीडी बन्द भएपछि बिरामी मर्कामा, महँगोमा निजी अस्पताल जान बाध्य – Health Post Nepal
२०७७ भदौ ९ गते १५:४०
भक्तपुर अस्पतालको ओपीडीसेवा बन्द गरिएपछि कोरोनाबाहेकका बिरामी मर्कामा परेका छन् । कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै जिल्ला अस्पतालको रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालाई कोरोना बिरामीको अस्पताल बनाइ अहिले ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छ।
कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने भएपछि अन्य बिरामीलाई कोरोना सर्नसक्ने भन्दै अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरिएको हो। केही दिनयता भक्तपुरमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुरको दूधपाटीस्थित भक्तपुर अस्पताललाई कोभिड ब्लक भनेर पूरै अस्पतालले कोरोनाका बिरामीमात्र हेर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयपछि नै यहाँका अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको हो। ओपीडी सेवा बन्द भएपछि कोरोनाबाहेकका बिरामी अलपत्र परेका छन्। यस्तै, समस्या भोगेकी शुशीला त्वायना भन्छिन्, ‘केही दिनअघि बुवा पर्खालबाट खस्नुभयो, खुट्टा टेक्नै नसक्ने भएपछि भक्तपुर अस्पताल पु¥यायौं तर यहाँ त ओपीडी सेवा नै बन्द रहेछ।’
त्यसपछि आफूले भक्तपुरको च्याम्हासिंहस्थित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपचारका लागि लगेको उनले जानकारी गराइन्। दुवै खुट्टा प्लास्टर गर्दा ८ हजार खर्च भएको उनको भनाइ छ।
‘प्राइभेट अस्पताल जानु परेको भए ५० हजारले पुग्दैनथ्यो होला,’ उनले थपिन्। भक्तपुर अस्पतालमा ओपीडी बन्द भएर जनताले दुःख पाएको उनले गुनासो गरिन्।
भक्तपुरको च्याम्हासिंहस्थित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रका इन्चार्ज डा. रत्न लासिवाँले भक्तपुर अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएपछि जनस्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको चाप बढेको जानकारी गराए।
पहिला अरु विशेषज्ञद्वारा उपचारमामात्र भीड हुने गरेकोमा अहिले सबैतिर भीड बढेको डा. लासिवाँ बताउँछन्। भीड व्यवस्थापनका लागि सामाजिक दूरी कायम गरी टोकन सिस्टमबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ।
सोमबारदेखि भीड बढी भएपवछि ओपीडीमा पनि टोकन स्टिम लागू गरिएको डा. लासिवाँले बताए। ओपीडीमा ३ तहमा टोकन वितरण गर्ने गरिएको छ। बिहान ७ बजेदेखि ११ सम्म ५०वटा, १२ देखि ३ सम्म ५० र ४ देखि ६ सम्मका लागि २०वटा गरी जम्मा एक सय २० टोकन वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
बिरामीको चाप हेरे योजना बनाउने उनको भनाइ छ। केन्द्रमा नाक, कान घाँटीबाहेक अरु सबै ओपीडी सेवा सञ्चालनमा छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस स्वास्थ्य केन्द्रमा टिकटको मूल्य ३० रुपैयाँ लिने गरिएको छ। भक्तपुर अस्पतालमा ओपीडी बन्द भएपछि विशेष गरेर न्यून आय भएका बिरामीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
स्वाथ्य बिमाबाट निःशुल्क उपचार गराउन पाएका उनीहरु शुल्क तिरेर निजी अस्पतालहरुतिर जान बाध्य छन्। एकजना बिरामी राम केसीले भने, ‘म पहिलादेखि मानसिक रोगको उपचार गराउँंदै आएको थिएँ, अहिले भक्तपुर अस्पतालमा उपचार गराउँला भनेर बसेको ओपीडी नै बन्द भयो, यहाँ भए अलि सस्तो हुन्थ्यो। अब काठमाडौंमा त्यो पनि यस्तो निषेधाज्ञामा कसरी जाने होला?’
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमाको पहिलो विन्दुमा भक्तपुर अस्पताल र जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र, चागुनारायण पोली क्लिनिक, दधिकोट पीएचसी क्लिनिक र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालमा मात्र सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। जसमा भक्तपुर अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालका ओपीडी सेवा पूरै बन्द छन्।
भक्तपुर अस्पतालमा ओपीडी बन्द भएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्डको पनि सुविधा लिन नपाएको बिरामीको गुनासो छ। निषेधाज्ञा भएपछि उपचार गर्न बाध्यताले नै निजी अस्पताल धाउनुपरेको उनीहरूले सुनाए। निजी अस्पतालमा टिकको मात्रै २५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।